Aoni 1080p FHD Autofocus Webcam A31 With Built-in HD Microphone ~ ICT.com.mm
HomeAoni 1080p FHD Autofocus Webcam A31 With Built-in HD Microphone
Aoni 1080p FHD Autofocus Webcam A31 With Built-in HD Microphone
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Resolution: 1080p/720p/VGA CMOS sensor witha2.0MP resolution Video Modes: MJPG & YUY2 Interface: USB 2.0/1.1 port Transmission Rate: 1920 x 1080 at 30 fps, 1280 x 720 at... [Learn more]
Brand: AoniSKU: 153638N/ASee more: Aoni, Conferencing System, Deals, Gadgets & Accessories, Products, Recent Updates, Shop, Star Universe, Under 100k, Warehouse, Web Conferencing SystemFilter by: Promotion, Warehouse, Webcams
Resolution: 1080p/720p/VGA CMOS sensor witha2.0MP resolution
Video Modes: MJPG & YUY2
Interface: USB 2.0/1.1 port
Transmission Rate: 1920 x 1080 at 30 fps, 1280 x 720 at 30 fps, and 640 x 480 at 30 fps
Signal-to-Noise Ratio: Greater than 48 dB
Focusing Range: 11.8″ to infinity / 30cm to infinity
Image Processor: Non-compression
Lens Material: High-quality glass
Microphone: Integrated omnidirectional mic
Plug-and-play free driver
HD Micro Image: Less than 2.75″/ 7cm
ဒီ Aoni အမှတ်တံဆိပ် A31 FHD Web ကင်မရာလေးက Resolution - 1080p အထိရရှိတဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ အလိုအလျောက် Focus ချိန်ပေးတဲ့ Auto Focus နည်းပညာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Built-in ထည့်သွင်းထားတဲ့ HD မိုက်ကရိုဖုန်းက နောက်ခံဆူညံသံတွေကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် Conferencing ပြုလုပ်ချိန်မှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ စကားပြောသံကိုသာ ကြားရစေမှာပါ။ (၀.၅)မီတာမှ (၅)မီတာ အကွာအဝေးရှိ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ယူနိုင်ပြီး (၃)မီတာ အကွာက အသံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အတွက် Meeting Room တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အထူး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကင်မရာကို ဘယ်ညာ (၃၆၀)ဒီဂရီ လှည့်နိုင်တဲ့အတွက် မိမိပြသလိုတဲ့ မြင်ကွင်းကို အလွယ်တကူပြသနိုင်သလို အပေါ်အောက်လှည့်လို့ရတဲ့အတွက် မြင်ကွင်းထောင့်အနေအထားကို မိမိစိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဆီလီကွန်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာကလစ်က မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ Display မျက်နှာပြင်မှာ ပွန်းရာမထင်ဘဲ တပ်ဆင်နိုင်သလို Tripod မှာလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။
Adjustable hang hook base
Can be flat laid,hand and put,you can also chooseatripod.
The up and down viewing angle can also be adjusted freely withinaspecific angle.
As far as you want, far and near freely.
Total price:K79,000 K47,900
This item: Aoni 1080p FHD Autofocus Webcam A31 With Built-in HD Microphone K79,000 K47,900